Tshala imali kuKlaviyo's Ecommerce Marketing Automation Namuhla Ngaphambi Kwesikhathi Sokuthenga Ngeholide | Martech Zone
Ngonyaka odlule, ngithathe umthwalo wokumaketha weklayenti le-ecommerce ukukhulisa ukuthengisa kwabo. Ngilungiselele zonke izici zesayithi labo le-ecommerce - kulokhu, Thenga. Ngakha kabusha amathempulethi, ngadidiyela uhlelo lwemiklomelo, ngangeza ukulethwa kwasendaweni, ngathatha izithombe zomkhiqizo ezintsha, amakhasi omkhiqizo athuthukisiwe… futhi ngakhuphula amazinga okuguqulwa kwawo abe ngamadijithi amabili.
Lapho sengikwazi ukuqinisekisa ukuthi isiza sisebenza kahle nokusebenza kokulethwa kokusebenza, ngangifuna ukusebenza ekwandiseni imali engenayo yonke. Ukusebenzisa isixazululo sokuzenzakalela sokumaketha okwathumela amakhasimende nge-imeyili noma kwabathumelela imiyalezo futhi kwawakhuthaza ukuba aqedele ukuthenga noma ukuwayenga ukuba aqale i-oda elisha kwakubalulekile.
Ngeshwa, amathuluzi we-Shopify ayashoda lapha. AbakwaShopify banekhono lokwenza ngezifiso ukulahlwa kwenqola yokuthenga namanye ama-imeyili - kepha abukho ubuhlakani noma ukubika okuqinile okuzungezile. Isibonelo, bengingenayo indlela yokuhlukanisa nokuthumela okunikezwayo okususelwa kumlando wokuthenga noma ezinye izici zamakhasimende.
IKlaviyo Ecommerce Marketing Automation
Ngemuva kokwenza ucwaningo online, nginqume ukuhlola Klaviyo. Kungakapheli ihora, ngaguqula ukugeleza kwabo okujwayelekile kokumaketha ukwamukela amakhasimende amasha, iziphequluli ezilahliwe ezingangezanga izinto enqoleni, amakhasimende enqola yokuthenga ashiywe, i-winback yamakhasimende, kanye nokuzenzekelayo okuthengiswayo / kwe-upsell okwenziwe ngokwezifiso nokuthumela.
Ukuhlanganiswa kukaKlaviyo ne Thenga kuyamangalisa. Ikwazile ukuxhuma ku-Shopify nokugaya yonke idatha yamakhasimende, futhi ngokushesha yenza ukugeleza okuningi okulungiselelwe. Ngenyanga yokuqala, ukuxhumana engikuklanyile futhi ngakwakha ngisebenzisa isihleli sabo se-imeyili sokuhudula bese uphonsa (i-Shopify ayinayo) ithole ukubuya ekutshalweni kuka-2286% yezindleko zohlelo. Cha… angidlali lapho.
Ukuhlanganiswa kukaKlaviyo neShopify kusivumela ukuthi sisebenzise ngokukhululekile nangempumelelo isu lethu lokumaketha ledijithali noma ngabe ukuhlukaniswa kokuziphatha nabathengi abajwayelekile, ukukhiqizwa okuholayo noma ukugeleza okuzenzakalelayo.
UMike, uBrand Manager weBobo
Nge-Klaviyo ne-Shopify, ungaqala ukuthumela ukuxhumana komuntu siqu, okubhekiswe kangcono kumzuzwana nje. UKlaviyo uqoqa futhi agcine yonke imininingwane efanele mayelana namakhasimende akho ukuze ukwazi ukuyisebenzisa ukuletha okuhlangenwe nakho okungalibaleki, ukushayela ukuthengisa okuningi, nokwakha ubudlelwano obuqinile.
Ukuhlanganiswa kwe-Shopify Ecommerce kaKlaviyo kufaka phakathi
Dashboard - Ngaphandle kokuzenzakalela kokumaketha, uKlaviyo unikezela ngedeshibhodi e-commerce eqinile eyenziwe ngokwezifiso ngokuphelele futhi inikeze yonke imininingwane yesitolo sakho seShopify ngesikhathi sangempela.
Ukugeleza Kokuzenzakalela Kwezentengiso - Ukugeleza kwe-Trigger kususelwa kuzinsuku, imicimbi, ubulungu bohlu, noma ubulungu besigaba futhi kusetshenziswe ukwahlukana, izihlungi, izivivinyo ze-A / B, nokuningi ukukhomba nokwandisa. Qalisa ngokushesha ngomtapo wezincwadi we-Shopify-specific automation kanye nama-imeyili.
Emuva Ezxwayisweni Zesitoko - Ukuphela kwemikhiqizo yesitoko akusadayisi okulahlekile. Vumela amakhasimende abhalisele izexwayiso lapho izinto zibuyela esitokweni - kulula kanjalo.
Izincomo zomkhiqizo ezenziwe ngezifiso - Easy-to-ukusetshenziswa, zero-isethaphu umkhiqizo izincomo okusekelwe ikhasimende upheqa, futhi umlando wokuthenga.
Imikhankaso - Awudingi ukuthumela ukugeleza kokuzenzakalela kokumaketha, ungathumela umkhankaso we-imeyili noma wombhalo noma nini lapho ungathanda kunoma iyiphi ingxenye ongayithanda.
Ukuhlolwa kwe-A / B - Imigqa yesihloko se-imeyili yokuhlola nokuqukethwe kalula ngqo ngaphakathi kokuhamba komsebenzi wokuzenzakalela kokumaketha.
Ukwenyuka kwamakhasimende - Chaza izingxenye ngaphandle kwemikhawulo. Sebenzisa noma iyiphi inhlanganisela yemicimbi, izakhiwo zephrofayela, indawo, amanani abikezelwe, nokuningi… ngaphezu kwanoma iluphi uhla lwesikhathi.
Amakhuphoni Dynamic - Thumela kalula amakhuphoni ahlukile kumakhasimende akho.
Amakhasi Wokuncamelayo - Brand futhi wenze ngezifiso i-imeyili yakho ephendulayo kanye namakhasi wokuncamela amakhasimende weselula.
Ukuhlakanipha okungekhona okwangempela - Izibikezelo ezikhiqizwe ngokuzenzakalela zenani lempilo yonke, ubungozi be-churn, ubulili, isikhathi sokuthumela esifanelekile, nangaphandle kwebhokisi izincomo zomkhiqizo owenzelwe wena.
Ukumaketha kwe-Ecommerce Lifecycle - Diliva amafomu aqondisiwe, anamagama wokwakha uhlu lwakho lokumaketha. Ngemuva kwalokho, hlanganisa amakhasimende ngeziteshi eziningi futhi usebenzise ukuqagela ukulindela ukukhwabanisa noma ukukhomba amakhasimende anenani eliphezulu.
Ukunothisa idatha yomkhiqizo - Vumelanisa ngokuzenzakalela izimfanelo zomkhiqizo ekuphumeni, uku-oda imicimbi, nakumarekhodi ezincwadi.
I-SMS - Sebenzisa ukwahlukaniswa okunamandla kukaKlaviyo nokwenza i-automation ukwenza ngezifiso yonke imilayezo yombhalo. Ukuphatha imvume kulula futhi kuzenzakalelayo ukuqinisekisa ukuthi imilayezo ithunyelwa kubantu abafanele.
Qalisa nge-Klaviyo Mahhala!
Ukuchofoza okukodwa kwe-Ecommerce Integration kaKlaviyo
IKlaviyo ine-70 eyakhelwe ngaphambili, ukuhlanganiswa ngokuchofoza okukodwa kanye nama-API avulekile ukuqinisekisa ukuthi ungathola kalula idatha yebhizinisi lakho ku-Klaviyo ngaphandle kokuhlupheka. Ukuhlanganiswa okukhiqizwayo kwe-ecommerce kuyatholakala ukukuvuselela nokusebenza ngokushesha usebenzisa:
Thenga kanye ne-ShopifyPlus
Tags: ukuzenzekelayo kugelezaphequlula ukulahlwaI-CLVinani lempilo yekhasimendeezokuhweba ngekhompyutha aiezishintshayo ze-ecommercei-imeyili ethengisa ngokuhweba ecommerceideshibhodi ye-ecommerceimikhankaso ye-imeyili ye-ecommerceukuhlukaniswa kwe-ecommercei-imeyili eyamukelekile ye-ecommerceimeyili ab ukuhlolwaKlaviyoMagentoukuthenga okubikezelayoshopify ab ukuhlolwathenga amakhuphonishopify ezishintshayo ezishintshayoumabhebhanaukuzenzekelayo kokumaketha i-smsizexwayiso zesitokoWooCommerce